Gabar safar aheyd oo lagu kufsaday Warsheekh iyo raggii falkaasi geystay oo la qabtay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Gabar safar aheyd oo lagu kufsaday Warsheekh iyo raggii falkaasi geystay oo...
Gabar safar aheyd oo lagu kufsaday Warsheekh iyo raggii falkaasi geystay oo la qabtay
Warsheekh (Halqaran.com) – Laba nin oo ku labisnaa dareyska Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa xalay gabar dhalinyaro ahayd ku kufsaday Degmada Warsheekh ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Kufsiga ayaa yimid, ka dib markii ay gabadha kala daggeen gaari ay la socotay, xilli uu maraayay goob ay jidgooyo u taalay, kuna taala halka lagu magacaabo Burka Sifacad.
Wararka ayaa sheegaya in raggaasi ay fasaxeen gaarigii ay gabadha la socotay, iyadoo muddo saacado ahna ay gabadhaasi ku haysteen duleedka Degmada Warsheekh.
Wararka ayaa intaa ku daraya gabadha oo xaaladeedu liidatay in ay dadka deegaanka halkaasi ku arkayn, xilli ay goobtaasi uga taggeen labadii nin ee falka kufsiga ahi kula kacay. Saacado yar ka dibna waxaa loo soo qaaday goobaha caafimaadka ee Magaalada Muqdisho.
Maamulka Degmada Warsheekh oo sameeyay hawlgal lagu baadigoobayo raggaasi ayaa u suurtagashay in ay gacanta ku soo dhigaan.
Dhanka kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in Maamulka Degmada Warsheekh uu labadaasi nin u gudbiyay Dekedii Macmalka ahayd ee Ceel Macaan, halkaasoo ay saldhig ku leeyihiin Ciidamada Dowladda.
Falalka kufsiga ayaa billihii ugu dambeeyay ku soo badanayay Gobolka Shabellaha Dhexe, iyadoo xilliyada qaarkood kufsi lagula kaco dumarka la socda gaadiidka isugu kala goosha Magaalada Muqdisho, Gobolada Bartamaha illaa Gobolada Waqooyi Bari.
Bulshada ku dhaqan Degmada Warsheekh ayaa aad u hadalhaysa ficilka foosha xun, ee lagula kacay gabadhaasi ka midka ahayd rakaabkii ku socdaalayay halkaasi.
Gabar safar aheyd oo lagu kufsaday Warsheekh